Chii chinonzi schizophrenia uye ndezvipi zviratidzo zvacho? | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Chii chinonzi schizophrenia uye ndezvipi zviratidzo zvacho?
Zvirwere zvinotyisa kazhinji zvinokanganisa kwete nhengo, asi kuziva. Schizophrenia chirwere chinouya nenzira dzakasiyana. Schizophrenia inogona kuzviratidza kuburikidza nekufungidzira, kunyepedzera, uye mutsauko mumaitiro nekufunga.
Chirwere ichi chinokanganisa zvakanyanya hupenyu hwevanhu, pamwe nehupenyu hwevadiwa. Kune dzimwe njodzi dzenzanga apo varwere vanorasikirwa nekwaniso yekudzora zviito zvavo. Ichi chinyorwa chinoburitsa chinonzi schizophrenia uye zvese zvaunoda kuti uzive nezvemhando dzakasiyana dzechichichiphrenia.
Chii chinonzi schizophrenia?
Icho chirwere chepfungwa chinowanzoonekwa chakakomberedza makore makumi maviri. Ichi chinhu chakakosha nekuti vanhu vanowanzo chinyonganisa nemamwe maratifomu. Zvisinei, nyanzvi havatendi kuti vanhu vanotambura nechirwere ichi kana zviratidzo zvikaonekwa panguva yehudiki kana mushure memakore makumi mana nemashanu. Ichi chirwere chinokanganisa manzwiro, maitiro uye kugona kufunga. Zviratidzo zvinosiyana, asi kazhinji nguva dzose chirwere chinoperekedzwa nekufungidzira, zvese zvinonzwika uye zvinoonekwa.
Munhu ane schizophrenia anoona zvinhu zvakaita semanzwi kana zviso izvo zvisina mumwe anonzwa kana kuona. Ichi chiratidzo chinowanzo shandura nzira yaunofunga. Nekuda kweizvozvo, vanhu vanogona kutaura monologue inoita kunge isina chirevo. Chimwe chiratidzo chakajairika kusawirirana kwekufamba. Semuenzaniso, munhu anogona kusimudzira ruoko rwake zvakanyanya kana kutora chimiro chisina kujairika kwekanguva.
Yakakura zviratidzo zveparanoid schizophrenia kunyengera uye kuona kwekunyepedzera kunowanzovapo. Zvinoenderana neongororo yakaburitswa muElectronic Medical Journal, urwu ndirwo rudzi rwechirwere.
Iko kune mhando inoratidzirwa neshanduko yakakosha mukunzwa kwevanhu. Zvakaoma kwavari kuti vazvibate zvakakwana. Semuenzaniso, kurwara kunogona kukonzera kuseka kana mumwe munhu akavapa nhau dzakaipa.
Iyo inonzi yakasara schizophrenia chirwere chepfungwa umo zvimwe zviratidzo zvisingatonge. Inonyanya kuve musanganiswa wemamwe marudzi. Nekudaro, yakasara schizophrenia inochengetedza zvimwe zviratidzo kunyangwe kurapwa.
Izvo zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti mhando dzese dzechirwere ichi dzakakomba zvakanyanya uye dzinotyisidzira hupenyu hwemunhu anorwara, pamwe nekumamiriro avo ezvinhu. Naizvozvo, iwe unofanirwa kubva watsvaga rubatsiro rwehunyanzvi kana mumwe munhu wepedyo akabatwa nedambudziko iri.
Neurosis-like schizophrenia: zviratidzo uye kusiyana kubva neurosis
Posted in utano
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,333 masekondi.